Fitbit te-hiatrika ny Apple Watch indray | Avy amin'ny mac aho
Impiry isika no niresaka momba ny isan'ny olona te-hanohitra ny Apple Watch, fa tsy misy mahavita mamoaka ny Apple Watch? Mazava fa hatramin'ny nanehoana ny foto-kevitry ny Apple Watch dia nilalao tsara ny karatra i Apple ary io dia tsy nampifantoka ny azo anaovana azy ho fitaovana nalaina tamin'ny angona Fahasalamana fa kosa izy nanatona azy ho toy ny fitaovana fampiasa amin'ny lamaody.
Tsy mbola nanana tarika mpanafika toa an'ireo orinasa amidy androany aho, saingy mazava amiko ny zavatra iray, ireo karazana tarika ireo dia tsy tarika azonareo rehefa mandeha any amin'ny teatra ianao, manana fivoriana manan-danja na, tsotra, te ho kanto amin'ny fotoana manokana ianao.
Amin'ny fiainako andavan'andro, afaka nampiasa ny iray amin'ireo tarika maro isa eny an-tsena aho, saingy toa fanapahan-kevitra tsara kokoa ny fampiasana ilay Apple Watch tokana misy ahy. Azoko atao ny manamboatra azy amin'ny tadiny izay heveriko fa mety amin'ny tranga tsirairay ary raha ampiarahiko amin'ny tariby vita amin'ny fingotra izany mba ho fijery Sporty kokoa. toy ny mametraka tadin-koditra aho miaraka amina palitao sy fehy, dia manohy manao ny asany izy.
Tsy noheverin'ny orinasa amin'ity karazana akanjo ity, zavatra izay nataon'i Apple avy amin'ny foto-keviny. Ny iray amin'ireo mpifaninana voalohany amin'ny Apple Watch dia ny Pebble, saingy fantatsika rehetra fa fotoana fohy taty aoriana dia novidian'ny orinasa Fitbit izy io ka, fotoana fohy taorian'izay, dia nanjary manjavona izy noho ny tariny. Hitan'izy ireo ny fitomboan'ny anjarany mandra-piorenan'ny Apple Watch, ary avy eo nanomboka nilatsaka izy ary tsy mahagaga izany hatramin'ny nivavahan'ny olona iray nividy tarika be isa, rehefa nanana fotoana manokana izy dia notahiriziny tao anaty vatasarihana.
Eny, i Fitbit dia tsy maintsy namantatra izany ary ny porofon'izany dia ny famoahana ny famantaranandrony Fitbit Ionic. Ny tena marina dia tsara be ilay izy, saingy tsy vita ny famenoana ireo mpanaraka ny marika ary raha ampitahaintsika amin'ny Apple Watch dia betsaka ny zavatra tokony hatsaraina. Natolony tamin'ny varotra ny Fitbit Blaze taty aoriana, saingy mbola tsy nanana ny fanekena andrasana izany ary ireo mpividy ve nahita vokatra iray mitentina 350 $ ary mbola tsy vita.
Eny, i Fitbit dia mandà ny ho faty eo amin'ny tontolon'ny famantaranandro marani-tsaina ary ankehitriny dia manana filokana vaovao hifaninana amin'ny Apple Watch izy. Filokana miloko kokoa ary mety io no nandrasan'ny mpanaraka azy. Mbola tsy manana ny anarany izahay fa azonao atao ny mijery ny fisehoany noho ny sary voasivana nasehonay anao tao amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity.
Ny CEO CEO Fitbit dia nanambara:
Heveriko fa hiova ny dinamika amin'ny taona 2018. Araka ny voalaza tetsy ambony, manantena izahay fa hanana famatsiana bebe kokoa ho an'ny besinimaro eny an-tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Fitbit dia te-hiatrika ny Apple Watch indray